महिलालाई यस्ता पुरुष कामुक लाग्छन र गर्छन मरिहत्ते - IAUA
महिलालाई यस्ता पुरुष कामुक लाग्छन र गर्छन मरिहत्ते
ramkrishna July 13, 2017	महिलालाई यस्ता पुरुष कामुक लाग्छन र गर्छन मरिहत्ते
तपाईंमध्ये कोही पुरुष हुनुहुन्छ भने यहाँ उल्लेखित पुरुषहरुको गुणलाई याद गर्नुहोस् । यस्ता पुरुषहरुको पछाडि महिलाहरु निकै पछि लाग्ने गर्दछन् ।
प्रायः महिलाहरु बुद्धिमान् पुरुषहरुप्रति निकै आकर्षित हुने गर्दछन् किनभने यस्ता मानिसहरुसँग सबै प्रश्नहरुको उत्तर हुने गरेको महिलाहरु विश्वास गर्छन् । यस्ता पुरुषहरुबाट सकारात्मक टिप्पणीहरु पाउने भएका कारण पनि महिलाहरु यस्ता पुरुषहरुलाई मन पराउने गर्दछन् । यसका साथसाथै बुद्धिमान् पुरुषहरु आफ्नो सम्बन्धलाई टिकाइराख्न बुद्धिमताले निकै ठूलो भूमिका खेल्ने कुरा थाहा भएको हुन्छ र उनीहरु आफ्नो यहि गुणले महिलाको मन जित्ने गर्दछन् ।२. निकै आत्मविश्वासीः
महिलाहरुलाई बिन्दास प्रकारको पुरुषहरु मन पराउने गर्दछन् । पुरुषहरु कुनै कुरामा तनावमा भइरहेको महिलाहरुलाई मनपर्दैन । यस्ता पुरुषहरु साहसिक हुने गर्दछन् र रमाइलो गर्न उनीहरुलाई मनपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरुको गुणले महिलाहरु निकै प्रभावित हुने गर्दछन्
Previous Previous post: कुन महिनामा जन्मिएका महिला वा पुरुष कस्ता हुन्छन ?
Next Next post: ल्यापटप किन्दा ध्यान दिनुपर्ने पाँच खास कुरा